Muxuu MW Xasan Sheekh ka yiri shirka wada-tashiga? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu MW Xasan Sheekh ka yiri shirka wada-tashiga?
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud, ayaa ka hadlay shirka wada tashiga qaran ee maalintii labaad ka qabsoomay Muqdisho, iyo arrimo kale oo la xariira nidaamka deyn-cafinta ee muddada jiitamayay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan shirka Wada-tashiga ee Dowladda Fadaraalka, Dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ugu socda teendhada Afisyooni.
MW Xasan, ayaa rajo fiican ka mujiyay natiijada shirka wuxuuna ku baaqay in loo istaago sidii uu u guuleysan lahaa shirka uu guddoominayo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
“Sooyaalka siyaasadda dalkeena waxa uu na barayaa in wadahadal kasta oo niyad-wanaag ku saleysan uu dhaliyo natiijo ay dadkeennu ku diirsadaan. Waxaan saamileyda siyaasadda, qeybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya ugu baaqayaa inay door ka qaataan sidii uu shirku ku guuleysan lahaa”. Ayuu yiri MW Xasan.
Wuxuu xusay in heshiis rasmi ah oo la gaaro ay micno weyn u sameyneyso bulshada Soomaaliyeed, isla-markaana ay badbaado u noqon karto dowlad-nimadeenna oo ku jirta xaalad halis ah.
Madaxweynihii hore ee dalka, wuxuu carrabka ku dhuftay in Khtarta waddanka ka jirta aysan kaliya ahayn Hay’adaha waqtigu ka dhamaaday, balse ay kala qeybsanyihin Hay’adihii Dowladda sida Sharci dajinta, iyo filinta, ciidankiina kala safan yahay, taas oo sii siyaadin karta amni darrada dalka.
Madaweyne Xasan Sheekh wuxuu xaqiijiyay inuu jiro wal-wal xooggan oo ku aaddan inuu fashilmo dadaalka deyn cafinta ee Sideedda sano la soo waday, taas oo sababi karta in dhaqaalaha liita ee dalka uu hoos u sii dhaco.
Ugu dambeyn Mushrax Xasan Sheekh, ayaa ku baaqay in si looga badbaado khatarta weyn ee taagan loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan shirka looga soo saaro, go’aamo suura-galinya in dalku u dareero doorasho xor ah.